प्रामाणिकता र सेवा ग्यारेन्टी - र्यापोर्ट हेर्नुहोस्
प्रामाणिकता र सेवा मार्ग को हरेक चरण ग्यारेन्टी।
आत्मविश्वासका साथ किन्नुहोस्।
हाम्रो जाँच गरिएको स्वतन्त्र विज्ञहरु
तपाईंको खरीद प्रमाणित गर्नुहोस्,
ताकि तपाईं कुल संग खरीद गर्न सक्नुहुन्छ
एउटा चलाख तरीका
जाँच गरिएको द्वारा प्रमाणीकरण
सुरक्षित वितरण संग
वाच Rapport को सबै लागतहरु लाई कभर गर्दछ
वाच र्यापोर्टले प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दछ यदि हामीले विक्रेताबाट प्राप्त गरेको आइटम १००% प्रामाणिक छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो खरीदको बारे कुनै शंका छ भने, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस् हाम्रो "परेशानी निःशुल्क" रिटर्न प्रक्रिया प्रयोग गरेर र पूरा फिर्ती फिर्ता लिनुहोस्। हाम्रो फिर्ती नीति क्लिक को बारे मा अधिक जान्न को लागी यहाँ.
क्रेता संरक्षण को बारे मा पढ्नुहोस्
भिन्टेज वाचहरू प्रामाणिकता ग्यारेन्टी सेवाको लागि योग्य छन्। भिन्टेज वाचहरू जुन तेस्रो-पार्टी प्रमाणीकरण पार्टनर द्वारा प्रमाणिक रूपमा प्रमाणीकरण गरिएको हो प्रतिस्थापन भागहरू हुन सक्दछ जुन मौलिक निर्माताबाट होईन यदि मूल उत्पादकले अब त्यस भागलाई गर्दैन भने।
पुरानो टाइमपीसहरू र धेरै प्रयोग गरिएको घडीहरू पानीलाई उनीहरूको मूल मूल्या rating्कन प्रतिरोधात्मक नहुन सक्छ। कृपया तपाईंको वाचलाई पानीमा प्रदर्शन गर्नु अघि वाचकसँग परामर्श गर्नुहोस्। मेकानिकल वाचहरू अन्य प्रकारका वाचहरू भन्दा बढी नाजुक हुन्छन्। कुनै गतिविधि गर्नुभन्दा पहिले सावधान रहनुहोस् जसले घडीमा झटका राख्न सक्दछ।
वाच र्यापोर्ट प्रमाणीकरण पार्टनरले वाच प्राप्त गरेपछि, प्रमाणीकरण पार्टनरले सर्वप्रथम वस्तुको पुष्टि गर्दछ र संपार्श्विक सामग्री सूचीबद्ध शीर्षक, वर्णन, र छविहरूसँग उपयुक्त छ। त्यसो भए तिनीहरूले बहु-पोइन्ट भौतिक प्रमाणीकरण निरीक्षण गर्ने छन्। अन्तमा, एक सुरक्षा ट्याग यस घडीमा संलग्न हुनेछ।
भिन्टेज र धेरै प्रयोग गरिएको घडीहरूलाई अनुभवी वाचमेकरले सटीक समयकीपुन पुनःस्थापना गर्न सर्विसिंग आवश्यक हुन सक्दछ। प्रामाणिकता ग्यारेन्टीले वारेन्टी प्रदान गर्दैन।
के हुन्छ यदि आईटमले निरीक्षण पास गर्दैन?
यदि वस्तुको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्न सकिएन वा वस्तुको सर्त यसको सूचीबद्धको अनुरूप छैन भने, यो विक्रेतालाई फिर्ता गरिनेछ, र खरीदकर्तालाई उनीहरूको मूल भुक्तानी विधिमा पूर्ण फिर्ती जारी गरिनेछ।